KINGTONE INGXELO YOBOMI
IMBALI KUNYE NEBENISO
Sinikezela ngoluhlu olubanzi lweemveliso
elunge kanye kwizicelo ezahlukeneyo kunye neemeko zokusebenza.
I-Kingtone 43dBm 20W Tetra DMR UHF BDA Ngaphandle emoyeni Ch...
I-Kingtone Dual Band Signal Repeater GSM 2G 3G 4G...
Kingtone JIMTOM® KT-DR600 Digital Radio Phinda...
Ukufumana i-Antenna yangaphandle engangeni manzi 824-960MHz...
Kingtone Outdoor Cell Phone Extender 5km Range ...
I-KingTone ibonelele ngezisombululo zokugubungela iTunnels
Ngenxa yothintelo lobude kunye nokwandiswa kobude, ukugqunywa kweetonela kuhlala kungumngeni kubasebenzi. Iimpawu zetonela zinciphisa iindlela zendlela yokubonelela ngokhuseleko. Indlela kaloliwe engaphantsi okanye itonela kaloliwe idla ngokuba mxinwa, kwaye inomphezulu ophantsi; ngelixa iitonela zendlela zithande ukuba nendlu enkulu kunye ne ...
Inkqubo yokuphinda i-ICS
I-Kingtone ICS Repeater isetyenziselwa i-GSM, i-DCS, okanye i-WCDMA yokwandisa imiqondiso yokhuselo ingakumbi kwizicelo zangaphandle. I-ICS Repeater iyakwazi ukurhoxisa ixesha lokwenyani imiqondiso yempendulo yeendlela ezininzi ngokusebenzisa itekhnoloji yeprosesa yedijithali kwaye inqande ukuphazamiseka ngenxa yokungonelanga kwe-isolati...
I-Kingtone Cellular repeater ye-In-building coverage
Indlela iKingtone Repeater Systems isebenza ngayo kwisakhiwo? Ngokusebenzisa ii-eriyali zenzuzo ephezulu ezibekwe kwindawo yophahla okanye ezinye iindawo ezifumanekayo siyakwazi ukubamba neyona miqondiso incinane yangaphandle ethi ibe buthathaka kakhulu xa ingena kwisakhiwo. Oku kwenziwa ngokukhokelela ii-eriyali zethu kuthungelwano lwasekhaya ngokubonelelwa...
Sityale imali kakhulu kwi-R&D, ukusungula izinto ezintsha, kunye nomgangatho wehardware wokwakha uphawu.